‘मन्त्रीज्यू, जंगल भरिने गरी १० लाख मान्छे कहिले भेला हुन्छन् ?’
युवापुस्तामा नेकपा नेता योगेश भट्टराई लोकप्रिय छन् । विकासको मोडालिटीमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने शैली नै उनको लोकप्रियताको कारण हो । उनै भट्टराई १५ साउनयता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
मन्त्री भएपछि उनको काँधमा धेरै जिम्मेवारी थपिए । तिनै जिम्मेवारीमध्ये एक हो, बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु ।
मन्त्री भएलगत्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नजुटे सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरी मंसिरसम्ममा निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गरिछाड्ने बताएका थिए । आफू कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा दक्षिण एसियाकै शानदार विमानस्थल बनाउन आएको र निजगढ़का सम्बन्धमा अब अध्ययन गर्नुपर्ने खास विषय नभएकाले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा उनले गरेका थिए ।
उनको अर्को एउटा घोषणाले धेरैको ध्यान तानेको थियो, ‘निजगढमा रुख कटानीको विरोध गर्ने वा रुखको माया लाग्नेहरू अँगालो हाल्न आए पनि हुन्छ, सरकार हेर्छ, को आउँछ रुखलाई अँगालो हाल्न ? जंगल भरिने गरी १० लाख मान्छे उतारेर विमानस्थल शिलान्यास गरिन्छ ।’
मंसिर गयो, पुस गयो, माघ पनि सकिन लाग्यो तर निजगढ विमानस्थल निर्माणमा प्रगति देखिएको छैन । बरु विमानस्थल निर्माणका लागि रूख कटान गर्ने योजना यथास्थितिमा राख्न २० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सबै काम रोकिएको छ । विनायोजना हचुवाको भरमा लाखौँ रूख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्रीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
‘उहाँ (मन्त्री भट्टराई)ले भाषण गर्दा १० लाख मान्छे ल्याउने भन्नुहुन्थ्यो तर काम ठप्प हुँदा पनि मुकदर्शक हुनुहुन्छ,’ निजगढ नगरपालिकाका स्थानीय गोपाल मोक्तान भन्छन्, ‘यो विमानस्थल मुलुकका लागि बन्न लागेको हो कि सीमित समूहका लागि बुझ्नै गाह्राे भइसक्यो ।’
स्थानीय धनबहादुर घिसिङ मन्त्री भट्टराईलाई प्रश्न गर्छन्, ‘मन्त्रीज्यू, जंगल भरिने गरी १० लाख मान्छे कहिले भेला हुन्छन् ?’ तर, के पर्यटनमन्त्री मौन छन् त ?
मन्त्री भट्टराईले २ पुसमा शिलापत्रसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, रुख काट्नेबाहेक निजगढ विमानस्थलका बाँकी काम धमाधम अघि बढ्छ । उनले यो पनि भनेका थिए कि विमानस्थलको काम अब कुनै बहानामा अल्झिँदैन ।
२ पुसमा मन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले लगानी बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासहितका सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन के थियो र प्रगति के भयो ?
समितिले विमानस्थल आयोजनाभित्र पर्ने टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनका लागि गठित टोलीलाई एक हप्ताभित्र अध्ययन सकाएर प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त समिति अहिलेसम्म टाँगिया बस्तीमै पुगेको छैन । बारास्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विजय यादव यसबारे अनभिज्ञ छन् । आयोजनालाई थाहा नदिएरै अध्ययन भइरहेको भए मन्त्रालयलाई त थाहा हुनुपर्ने हो । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा एक सातायता कुनै ‘रिपोर्टिङ’ प्राप्त भएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।’
उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रगति के छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन ।’
‘टोलीले काम थालेको हुन्थ्यो भने आयोजनालाई थाहा हुन्थ्यो नि’, टाँगिया बस्तीका अगुवा रमेश सापकोटाले भने ।
बरु यो बीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विमानस्थलको प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्तीमा बिजुली बाल्ने घोषणा गरेर फर्किएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतिर वन क्षेत्रमा रहेको यस बस्तीमा १ हजार ४ सय ७६ (२०६८ सालको जनगणनाअनुसार) घरधुरी छन् । टाँगिया बस्तीमा धावन मार्ग बनाउने सरकारको योजना छ । यद्यपि, त्यहाँ बसिरहेका नागरिकको स्थानान्तरणको विषयमा निर्णय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
काठगाउँमा देखियो प्रगति
आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने काठगाउँ बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका काम जतिसक्दो चाँडो सक्ने निर्णय समितिले गरेको थियो । यो विषयमा भने आइतबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले मुआब्जा बुझ्न बाँकी रहेका काठगाउँवासीलाई बोलाएर सामान्य छलफल गरेको छ ।
कोहल्वी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरतबहादुर भण्डारीले नगरपालिकालाई आधिकारिक जानकारी नआए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाएको सुन्नमा आएको बताए । कोहल्वी नगरपालिकाभित्र पर्ने काठगाउँका ३० प्रतिशत स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ ।
वन मन्त्रालय बेखबर
विमानस्थलका लागि प्रस्तावित १९ सय हेक्टर जमिनमा पर्ने रुखहरूको संख्या किटान गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न समितिले वन मन्त्रालयलाई भनेको थियो । यो विषयमा वन मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेले निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको र कुनै प्रक्रिया पनि अघि नबढेको बताए । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले १ लाख २८ हजार रुख काटिने जनाएको छ । यसअघि २४ लाख रुख काटिने विषय सार्वजनिक भएपछि पर्यावरणवादीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
पहुँच मार्ग र पेरिफेरी सडकसम्बन्धमा
२ पुसमा बसेको उच्चस्तरीय समिति बैठकले पहुँच मार्ग र पेरिफेरी सडक निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले रुख काट्न रोक लगाएको सन्दर्भमा प्राधिकरणले यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
‘निर्देशन मात्रै दिएर कहाँ हुन्छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सडक निर्माण गर्दा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ तर सर्वोच्चले रुख काट्न रोक लगाएको छ । यस्तोमा हामीले कस्तो खालको प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।’
२०७१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमातहत ल्याइएको थियो । सोहीअनुरूप १९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको पहुँच मार्गमा पर्ने रूख कटान गर्न नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको थियो । सर्वोच्चले रुख काट्न रोक लगाएसँगै उक्त सम्झौता अन्योलमा परेको छ ।
के गर्दै छ लगानी बोर्ड ?
समितिले लगानीको मोडालिटी जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यो विषयमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ६ असोजमा सिंहदरबारमा भएको लगानी बोर्डको बैठकले प्रस्तावित विभिन्न देशका सात कम्पनीमध्ये मापदण्ड पुगेका आधारमा स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (एजी) लाई छनाेट गरेको थियो ।
त्यसपछि बोर्डले ज्युरिच एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रस्तावका लागि कम्पनीलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको थियो । तर, ४ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । लगानी बोर्डका कन्सल्टिङ स्टाफ आशिष गजुरेलका अनुसार लगानी बोर्ड अझै ज्युरिचको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छ ।
‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, छिट्टै उता (कम्पनी)बाट प्रतिक्रिया आउँछ र बाँकी काम अघि बढ्छ ।’
ज्युरिचले किन वास्ता गरेन ?
विभिन्न आन्तरिक समस्या समाधान हुन नसकेकाले विदेशी कम्पनीले नपत्याएको जानकारहरू बताउँछन् । लगानी मोडालिटी टुङ्गो लागेर काम अघि नबढेसम्म विमानस्थल बन्ने कुरामा निजगढवासी नै ढुक्क देखिँदैनन् ।
निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश खनाल भन्छन्, ‘आन्तरिक समस्या हल नगरी विदेशी कम्पनीले आएर काम नगर्न पनि सक्छ, त्यसैले पहिले हामीभित्रैको समस्या हल गर्नुपर्छ ।’ सुरेश खनाल, नगर प्रमुख, निजगढ नगरपालिका, बारा
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी लगानी मोडालिटी नै कुनै पनि आयोजना निर्माणको प्रमुख पक्ष भएको बताउँछन् । ‘निजगढ विमानस्थलको लगानी मोडालिटी, यसको गुरुयोजना, डीपीआरलगायतका कुरा नटुङ्गिएसम्म विमानस्थल बन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन’, डा. अधिकारी भन्छन् ।
नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निजगढ विमानस्थलका लागि ३ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ ।
कागजमै सीमित कार्ययोजना
९ भदौमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रमुख प्राथमिकताका कार्यक्रममा नौ महिनाभित्र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी तथा टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गर्ने, वृक्षरोपणको क्षेत्र पहिचान गर्ने र रुख कटानको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने कार्ययोजना उल्लेख थियो । तर, ती कुनै पनि काममा प्रगति देखिएको छैन ।
निजगढ विमानस्थल बनाउने विषयमा मन्त्री भट्टराई सकारात्मक देखिए पनि सरकारबाट भइरहेका प्रयासहरू भने अपर्याप्त रहेको राखेपका पूर्व सदस्यसचिवसमेत रहेका निजगढका पर्यटन व्यवसायी युवराज लामा बताउँछन् । ‘विमानस्थल बनाउन सरकार तातेजस्तो पनि गर्छ, सेलाएजस्तो पनि गर्छ,’ लामा भन्छन्, ‘यत्रो ठूलो आयोजनामा अन्योल सिर्जना हुनु दुःखद पक्ष हो ।’ हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा चार किल्ला र सीमांकन, तारबारको काम गरिसकेको छ । निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने दुइटा नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विजय यादवले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ ।
सन् १९९२ मा भएको थाई एयरवेज इन्टरनेसनलको एयरबस र त्यसको दुई महिनापछि पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान दुर्घटनापछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पका रूपमा तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६, १२:१०:००